Liverpool & Tottenham Oo Dhibcaha Ku Kala Qeybsaday White Hart Lane Ka Dib Kulan Xiiso Leh Oo Dhexmaray Maanta. - Wargane News
Home Sports Liverpool & Tottenham Oo Dhibcaha Ku Kala Qeybsaday White Hart Lane Ka...
Kooxaha Liverpool iyo Tottenham ayaa dhibcaha ku kala qeybsaday garoonka White Hart Lane kulanka wareega 3aad ee horyaalka Premier League ka dib rigoore uu dhaliyay James Milner markii uu kansalay gool uu qeybtii labaad dhaliyay Danny Rose.
Tababare Jurgen Klopp ayaa shaxdisia Premier League dib ugu soo dhaweeyay Sadio Mane oo seegay kulankii Burnley halka Joel Matip lagu soo bilaabay daafac dhexe kulankiisii ugu horeysay ee Premier League iyadoo Philippe Coutinho uu isna taam u noqday inuu ku soo bilowdo shaxda Reds.
Kooxda Tottenham waxaa ka maqan goolhaye Illoris iyadoo Vorm uu goolka ku soo bilowday halka Dembele uu weli ganaax kaga maqan yahay kooxda Spurs. Waxaa taas u sii dheereyd Kyle Walker oo bartamihii qeybta hore xumad darteed uga baxay ciyaarta.
Liverpool ayaa gacanta sarre laheyd qeybtii hore ee ciyaarta iyagoo helay fursadihii ugu fiicnaa, Philippe Coutinho ayayna soo martay fursad dahabi ah bartamihii qeybta hore markii uu kubad macaan ka helay Firmino laakiin waxaa kubada ku dhegay oo si fantastik ah u badbaadiyay goolhaye Vorm.
Reds ayaana hogaanka u qabatay ciyaarta dhamaadkii qeybta hore markii rigoore loo dhigay iyadoo Erik Lamela uu qalad kula galay xerada ganaaxa ciyaaryahanka reer Brazil Firmino, waxaa rigoorada u soo istaagay James Milner kaasoo dhan qaldan u diray goolhaye Vorm islamarkaana ciyaarta ka dhigay 1-0 oo aheyd natiijadii lagu kala nastay qeybtii hore.
Daqiiqadii 53aad daafaca Joel Matip ayaa ku dhawaaday inuu dhaliyo goolkiisii ugu horeysay ee Premier League isagoo kubad kooner ah uu soo qaaday Milner ku sigay goolka Tottenham waxaananay si ciriiri ah ku dulmartay goolka.
Mane ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqadii 57aad laakiin goolkiisa offside ayaa loo diiday iyadoo kaliya Lallana ay cagtiisa dhaafsaneyd difaaca ka hor inta uusan Mane kubada u dhigin taasoo keentay in calanwadaha uu calanka taago.
Tottenham ayaa fursadihii ugu horeeyay ay u bilowdeen daqiiqadii 62aad markii Dier uu kubad ka soo dhigay dhanka midig iyadoo Eriksen oo meel fiican u joogay inuu dhaliyo uu kubada dulmariyay shabaqa.
Waxaa ku xigtay daqiiqadii 65aad markii laad xor ah loo dhigay Tottenham Erik Lamela ayaa haweystay goolka laakiin waxaa kubada ka bixiyay goolhaye Mignolet, koornadii ka dhalatay ayaa hadana waxaa madax la helay Alderweireld laakiin mar kale waxaa u babac dhigay goolhaye Mignolet oo si fantastik ah u bixiyay.
Tottenham ayaana heshay goolkii ay raadinayeen daqiiqadii 72aad, daafaca Alderweireld ayaa kubad qatar ah u soo dhigay Dier garabka bidix iyadoo Milner uu booskiisa baneeyay, karooskii uu Dier soo dhigay waxaa madaxa ay ugu dhacday Lallana laakiin Danny Rose ayaa helay oo shabaqa cusjiyay ciyaartana ka dhigay barbaro 1-1 ah.
Ciyaarta ayaa ku soo dhamaaday barbaro 1-1 ah iyadoo goolkii Danny Rose uu noqday mid natiijada dejiyay, kooxda Liverpool ayaana laga beeniyay guul ay u baahneyd ka dib guuldaradii Burnley ka soo gaartay isbuucii hore.
Tottenham ayaa seddex kulan oo ay ciyaarta waxa ay ka heleen shan dhibcood, halka Liverpool ay ka heshay afar dhibcood.